किन गोप्य अंग देखाउन मन पराउँछन् युवतीहरु यस्तो छ कारण ! « Swadesh Nepal
किन गोप्य अंग देखाउन मन पराउँछन् युवतीहरु यस्तो छ कारण !
काठमाडौं । खासगरी मनोरञ्जन उद्योगमा सेलिब्रिटी युवती र मोडेलहरूको ‘क्लिभेज सोअप’ फेसनजस्तो बनेको छ । यसले तस्बिर, भिडियो र समारोहमा पनि युवतीहरूतिर धेरैको ध्यान मात्र खिच्ने गरेको छैन, चर्चा पनि चलाउने गरेको छ ।
क्याम्ब्रिज शव्दकोषले क्लिभेजलाई ‘महिलाको छातीबीचको सानो स्थान’ भनेको छ । उसको व्याख्यामा ‘त्यो महिलाले माथितिर नछोपीनेगरी लगाएको बेला देखिन्छ । यो पुरूष आकर्षणको केन्द्र पनि हो ।’ नेपालमा क्लिभेज प्रदर्शन सामान्य जस्तो भइसकेको छ । आम साधारण युवतीहरूमा पनि फेसन बनेको छ । सेलिब्रिटीहरूले त नियतबस नै यस्तो देखाउने गरेका छन् । क्लिभेजमा देखिने स्तनका भागमा ट्याटु खोप्नेदेखि सामान्य छोप्नेहरूको नियत नै आकर्षण गराउनु रहेको देखिन्छ ।
एकजना लेखिकाका अनुसार महिलाले सार्वजनिक रूपमा यौ%निक आकर्षणका निम्ति लुगा लगाउँदा देखिने स्थान भनेकी छन् । उनले भनेकी छन्,‘त्यो खासगरी पुरूष आकर्षणका निम्ति गरिने व्यावसायीक उपाय पनि हो । महिलाहरूले धेरै कमाउनका लागि यस्तो प्रकारको ट्रिक अपनाउने गर्छन् ।’ तर यसको सम्पूर्ण अर्थचाहीँ सतर्क वा आकर्षण गराउने नै हुन्छ । पुरूषहरू स्तन हेर्न रुचाउने भएकाले महिला सेलिब्रिटीले क्लिभेज देखाउन थालेको उनको तर्क छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वक्ष (छाती) विशेषज्ञ इलिजाबेथ डेलले भनेकी छन्,‘क्लिभेजको पहिलो नियम भनेको तिमि कतिसम्म निहुरिने भन्ने होइन बरु कहिले र कहाँ देखाउने भन्ने हुन्छ ।’ कतिपय लेखकहरूले क्लिभेजलाई साहित्यिक र सृजनात्मक रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।
एकजना लेखकले भनेका छन्,‘सम्झ केटाहरू हो । क्लिभेज भनेको सूर्यजस्तो हो जुन हतासमा एक पटकमात्र हेर्ने गरिन्छ तर यो निरन्तर हेर्नु खत%रापूर्ण हुन्छ ।’कतिपय सन्दर्भमा क्लिभेजको यौ%निक तर्क पनि राखिएको छ । एउटा भनाई छ,‘महिलाको क्लिभेज देखिनुले पुरुषले प्रति स्तनबारे ५० प्रतिशत हेक्का राख्न सक्छ ।’
कतिपय महिला अधिकारकर्मीहरूले यसलाई आफु अनुकुलतामा पनि व्याख्या गरेका छन् । एउटा भनाई छ,‘क्लिभेज पुरुषहरूका लागि महिला कति शक्तिशाली छन् भन्ने हतियार पनि हो ।’ क्लिभेजबारे विभिन्न क्षेत्रमा फरक अनुभुति र व्याख्या छन् । अभिनेत्री मेरिलिन मनोरोयले व्यंग्यात्मक हिसाबमा व्याख्या गरेकी छन्,‘निषेधले कठिन गरेको के हो भने क्लिभेज देखाउँदा चित्त दुखाइन्छ तर अन्य केही नदेखाउँदा पनि उनीहरूको चित्त दुखाई हुन्छ ।’